Tsika Nyaya muZimbabwe
Yako yega Tsika Essay isina kubhadhara kwakavanzika. Raira muZimbabwe tsika dzakatemwa kubva kuUK uye US vatauri vemo. 24/7 Tsigiro, Mahara Dzokororo uye yemhando yepamusoro inoshanda munguva pfupi
Tsika Yenyaya Yekunyora Sevhisi Inogona Kuita Kuti Hupenyu Hwako Hureruke
Iyo yakasarudzika rondedzero yekunyora sevhisi inopa yakagadziriswa zvinyorwa muUK. Iyo inomiririra yako wega zvinodiwa uye nhungamiro panguva yekuraira. Nyanzvi vanyori vanyori vanopa mhando tsika yekunyora masevhisi. Vanyori vese masters uye vadzidzi vehunyanzvi hwePhD. 3. Assurance Assurance - Iyo sevhisi sevhisi yakanaka kwazvo kusarudza.
Munyori wenyaya anopa nhungamiro yakakodzera kumunyori. Vanyori ava vanoshandisa hunyanzvi hwakanakisa kuburitsa zvinyorwa zvakanakisa. Izvo zvemukati mega roga roga chinyorwa chakasiyana. Iko hakuna zvakapetwa zvinhu mune chero chinyorwa. Chinyorwa chega chega chine chakasiyana pachacho. Pane zvinhu zvinoverengeka zvinokanganisa chinyorwa ichi, icho chinokurukurwa pazasi.
Tsika yenyaya yekunyora inogona kugoverwa mumhando mbiri: imwe-kune-imwe uye maviri-kune-mazhinji. Mune imwe-kune-imwe rondedzero, munhu mumwe anonyora rondedzero. Izvo zviri nyore kwazvo kumunyori nemutengi kupfuura uya wevaviri-kune-vakawanda, apo vese mutengi nemunyori vanyore rondedzero imwechete.
Tsika yekunyora yekunyora sevhisi inopa yakanakisa masevhisi kune avo vanoda kunyora tsamba yavo. Basa rerondedzero rinovimbisa kuti munyori haafanire kunetseka nezvekubiridzira paanenge achinyora chinyorwa. Vanyori vhezheni vane ruzivo rwakazara rwemitemo yekodzero. Ivo vanoshandisa matekinoroji azvino kuona kuti chinyorwa chinoramba chiri chepakutanga. Munyori wenyaya wenyanzvi anonzwisisa zviri pamutemo zvekodzero uye anova nechokwadi chekuti rondedzero yacho ndeyepakutanga uye haina kutyora chero mutemo.
Tsika yekunyora yekunyora sevhisi inoshanda zvakanyanya kune avo vanoda kunyora bepa redzidzo kana chinyorwa. Vanyori vanonzwisisa mafambiro edzidziso echidzidzo ichocho uye vanonyora nenzira yekuti muverengi anzwisise chidzidzo. Ivo vanoziva nzira yekuburitsa nyaya yacho nenzira yekuti muverengi agone kuenderana nemusoro wenyaya zvakanaka.
Tsika yekunyora yekunyora sevhisi inoshanda zvakanyanya kune avo vanoda kunyora chinyorwa kuti vafadze mukuru wezvedzidzo mumunda wavo. Munyori wenyaya anonyora yakadaro nyaya ine akawanda mapoinzi uye ruzivo, izvo zvinoita kuti muverengi afunge zvakakwana nezvenyaya iyi.
Tsika yekunyora yekunyora sevhisi inobatsira iwe kusarudza iwo musoro wenyaya munzira kwayo. pepa rako redzidzo. Iyo inochengetedza nguva, mutengo uye kushanda nesimba kuti mukwanisi wenyaya uye mutoo wenyaya yako. Iyo yechinyakare rondedzero munyori anoshandisa matekinoroji ekupedzisira kunyora bepa nenzira iyo iyo vateereri vanoda.
Iyo yetsika rondedzero yekunyora sevhisi inopa yakasarudzika chinyorwa chinyorwa masevhisi mukati meUK. Ivo vanopa rondedzero yekunyora sevhisi kuvadzidzi nevadzidzisi munyika yese.
Iwe haufanire kunetseka nezvehunhu hwebasa. Vanyori vane hunyanzvi uye vanoendesa iro basa nenguva uye pabhajeti. Chikamu chakanakisa chetsika yekunyora rondedzero yekunyora ndechekuti iwe unogona kuwana rubatsiro kubva kune vane ruzivo vanyori. Kana iwe uchihaya nyanzvi, haufanire kushandisa mari yakawanda uye nguva kunyora imwecheteyo chinyorwa.
Iko hakuna kunetsekana mukuhaya yetsika yenyaya yekunyora sevhisi. Ivo vanotarisira zvese. Ibasa revanyanzvi kukugadzirira basa racho nemazvo uye kuona kuti hausangane nematambudziko mukunyora kwacho.
Tsika yekunyora yekunyora sevhisi izere pasuru yezvinhu uye zvakanaka. Kana iwe uri munhu akabatikana uye uine rakasimba kwazvo purogiramu, unogona kuhaya tsika yenyaya yekunyora sevhisi inozobata rako rekunyora basa, kubva kumba.
Iko hakuna kumanikidzwa kwemazuva ekupedzisira pamwe netsika yekunyora sevhisi. Ichi ndicho chikonzero nei vazhinji vevanyori vachisarudza kuhaya mupi webasa rekunyora.
Nokusununguka kwakadaro uye nyore, zviri nyore kuchengetedza yako yakatarwa yekupedzisira basa rekunyora uye zvakare zviri nani kuhaya wakanaka mhando webasa mupi. Kana iwe ukahaya mupi webasa webasa, iwe unozogona kunakidzwa wakasununguka kunyora purogiramu uye unogona kutarisa pane zvimwe zvakakosha zviitiko.